तपाईलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ - Shiv's Era
तपाईलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ
2022 को शीर्ष 10 मेटावर्स र वेब 3.0 मिथकहरू डिबङ्क गर्दै
2022 र त्यसपछिका लागि शीर्ष टेक्नोलोजी प्रचलनहरू बन्न सक्ने सम्भावित दुई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू
मेटावर्स मुख्यतया गेमिङका लागि हो र यसमा कुनै वास्तविक-विश्व उपयोगिताहरू छैनन्
मेटावर्स रियल इस्टेटमा लगानी गर्नु वास्तवमा राम्रो विचार हुनेछ
2022 र त्यसपछिका लागि शीर्ष टेक्नोलोजी प्रचलनहरू बन्न सक्ने सम्भावित दुई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू के हुन्?
2022 र त्यसपछिका लागि शीर्ष टेक्नोलोजी प्रचलनहरू बन्ने सम्भावना भएका दुई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू मेटावर्स र वेब 3.0 हुन्। दुबै टेक्नोलोजीहरूको आधारभूत र अवधारणाहरू अझै विकसित भइरहेका छन्, त्यहाँ दुई ठ्याक्कै के हो भन्नेमा कुनै सहमति छैन।
Behemoths देखि VR खेल मैदान सम्म: Metaverse व्याख्या
Decentraland र The Sandbox जस्ता केही प्रख्यात प्लेटफर्महरू, प्रयोगकर्ताहरूसँग पहिले नै डेस्कटप, स्मार्टफोन वा ल्यापटप जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ। त्यसोभए, यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन कि मेटाभर्स मात्र पहुँच गर्न सकिन्छ यदि प्रयोगकर्ताहरूले VR हेलमेट लगाएका छन्।
मेटावर्स फेसबुक वा मेटा प्लेटफर्महरूको स्वामित्वमा छैन, सामान्यतया। फेसबुकले यो भर्चुअल संसारलाई आकार दिन र विकास गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने परिकल्पना गर्दछ। विज्ञहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् कि फेसबुकले नयाँ क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सक्छ।
दोस्रो जीवनबाट मेटाभर्स कसरी विकसित भयो भन्ने एनोटेटेड इतिहास
धेरै व्यक्तिहरूले मेटाभर्सलाई सेकेन्ड लाइफमा फर्काउँछन्, जुन 2003 मा सुरु भएको भर्चुअल संसार हो। रोब्लोक्स, स्यान्डबक्स, एक्सी इन्फिनिटी, र डेसेन्ट्राल्याण्ड एक दशकभन्दा बढी समयदेखि हामीसँग छन्। मेटाभर्स बढ्ने र इमर्सिभ संसारमा विकसित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वेब 3.0 के हो?
वेब 3.0 वेबसाइटहरू र अनुप्रयोगहरूका लागि इन्टरनेट सेवाहरूको तेस्रो पुस्ता हो जसले डेटा-संचालित र अर्थपूर्ण वेब प्रदान गर्न डेटाको मेसिन-आधारित बुझाइमा केन्द्रित हुनेछ। समर्थक र आलोचकहरूले तथ्यहरू फरक रूपमा बताउने भएकाले मिथकलाई खण्डन गर्न सकिँदैन।
वेब 3.0 अवधारणाको समीक्षा गर्दै: हामी यसलाई कसरी महसुस गर्छौं?
मार्केटरहरू र कार्यकर्ताहरूले वेब 3.0 को विचारलाई ओभरसेल गर्छन्, तर यसको बारेमा छलफल भइरहेको तुलनामा, यसको आधारमा धेरै थोरै कार्यहरू गरिएका छन्। हामी सूचना-सम्पन्न पुस्तामा बाँचिरहेका छौं जहाँ कुनै विशेष प्रकारको प्रविधि प्रयोग नगर्दा डाटा र सूचनाको पहुँचलाई रोक्न सकिँदैन।
PwC ले एक भर्चुअल डिलरको लागि योजनाहरू अनावरण गर्दछ, सम्भाव्यताहरूसँग सामाजिक।
व्यवसायी नेताहरूले मेटावर्स वरिपरि योजना र रणनीति अपरेसन सुरु गरिसकेका छन्। PwC जस्ता कम्पनीहरूले मेटाभर्स शाखाहरू खोलेका छन् ताकि उनीहरूले उन्नत प्राविधिक पक्षबाट ग्राहकहरूको मागहरू कल्पना गर्न सकून्।
Metaverse: एक ठाउँ जहाँ केहि सम्भव छ
मेटावर्सले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, VR, AR, र 3D ग्राफिक्स सहित शक्तिशाली प्रविधि प्रयोग गरेर धेरै अन्तरसम्बन्धित संसारहरू समावेश गर्दछ। तर यो वास्तविक-विश्व अर्थतन्त्रको आफ्नै नियम र परिणामहरूको धेरै हिस्सा हो।
वास्तविक संसार वा मेटाभर्समा सम्पत्तिमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा, विचार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ROI हो। Metaverse मा घर जग्गा मा लगानी वास्तव मा एक राम्रो विचार हुनेछ।
वेब 3.0 के हो: अनलाइन खोजी र जडानको भविष्य कस्तो देखिन्छ
Web 3.0 ले मुख्यतया खोजको समय परिवर्तन गर्नुको सट्टा सिमान्टिक जडानको लागि AI प्रयोग गरेर खोज गुणस्तर सुधार गर्नमा केन्द्रित हुनेछ। सञ्जाललाई सान्दर्भिक खोज परिणामहरू र सहज इन्टरनेट अनुभव प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले वेब 3.0 नेभिगेट गर्न समान यन्त्रहरू र इन्टरफेसहरू प्रयोग गर्नेछन्
वेब 3,0 ह्यान्डल गर्न आउँदा प्रयोगकर्ताहरूले विशेष उपकरणहरू र इन्टरफेसहरूको स्वामित्व लिनु पर्दैन। तिनीहरूले वेब 1.0 र वेब 2.0 बाट सञ्चालन गर्दा तिनीहरूले प्रयोग गरेको उही यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।
This post is also available in: हिन्दी (Hindi) English Tamil Gujarati Punjabi Malayalam Telugu Marathi Nederlands (Dutch) Français (French) Deutsch (German) עברית (Hebrew) Indonesia (Indonesian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) Melayu (Malay) Polski (Polish) Português (Portuguese, Brazil) Русский (Russian) বাংলাদেশ (Bengali) العربية (Arabic) Español (Spanish) اردو (Urdu) Kannada